Dadka Aanan Hadafka Lahayn Waxay ku Suganyihiin Nolol Aan Farxad Lahayn! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Warshiikh Waa Deegaan Dalxiis Iyo Dhalintii Booqatay |Tukesomalism.com
Asalka iyo Bilowga Wadaaddada Soomaaliya: “Diin mise Dan kale!”
Cabdixakiim-Tiyari Cabdillaahi Aaden, February 12, 2020
Cabdijabaar Sh. Axmed — April 19, 2018
Qofka caqliga la saaxiibka ah wuu dareemi karaa dhibaatada nolosha ay leedahay iyo sidda looga baxsado. Dadka inyar oo kali ayaa garata dhibaatada ay leedahay nolosha iyo waliba waxyaabaha horyaallo inay qabtaan. Waxaad arkaysaa dad badan oo ka calaacalaayo nolosha waliba iyagoo ku calaacalaayo qofkale oo aanan waxbo u qabani Karin. Heerarka kala duwan ee nolosha ayaa ah waxyaabaha aadan adiga masuul ka ahayn balse Illaahay swc ayaa siddaas kuu gartay. Inkastoo Illaahay kuu gartay qeyb walbo ee aad kaga jirta nolosha hadana sawabteedda adiga ayaa leh.
“Qofwalbo iyo xaalad walbo aad la kulanto nolosha, qaladka adiga ma lihid ee wakhtiga iyo saacada ayaa kula kulansiiyay.”
Hadana waxaa laga maarmaan ah inaad la timaado xeelado qeexayso qofka aad la kulmayso iyo waliba danaha guud ee ku horyaalo.
Qofwalbo iyo xaalad walbo oo kula kulanto waxaa keena waa wakhtiga, laakiin hadalkeyga aan kuu kala dhigdhigo:, xaaladaha adag ee aad la kulanto marwalbo waxaa keeno waa wakhtiga hadana ogaaw sawabta inaad adiga leedahay marwalbo. Waxwalbo sawabta adiga ayaa leh, maxaa yeelay maanta haddii aad tahay shaqo la’aan soo sax ma ahan inaan ku iraahdo sawabta adiga ayaa iskaleh haddii aadan raadiskeeda xoogga saarin.
Waxaan horey u qoray maqaalo badan oo ka waramaayo sidda shaqo loo abuurto, anigoo isku dayaayo inaan dadka ka dhaadhiciyo inay iyagu waxwalbo sameysani karaan. Balse dadka inyar oo kali ayaa si fiican ii garato. Sawabta ayaa ah bini’aadamka isku garasho Illahay kama wada dhigin.
Anigoo raba inaan qoraalkeyga kusoo koobo macnayaal gaagaaban ayaan waxaan kuu shegayaa sidda kali aad guul fiican ku gaari karto waa inaad leedahay hadal cad. Waxaa la sheegaa dadka aanan hadafka iyo ula jeedba lahayn waxay u shaqeeyaan dadka ula jeedka leh iyo hadafka.
Tusaale ahaan: Haddii asxaabtaada ama saaxibadaada ay yihiin kuwa hadaf iyo aragti quman leh adigana aad ku dhex-jirto wax hadafna aadan lahayn, waxaad noqonaysaa shaqsi markii loo yeerto imaani karaayo, hawshii iga caawi la yiraahdana ka caawini karo, sawabtoo ah meel aad u socoto ma taqaanid, hadafna ma lihid waana sawabta aad ugu shaqeynayso qof hadaf leh.
Inaad wado la fahmi karo jeexato waa kuu sharaf, waxaana lagama maarmaan ah inaad la timaado aragti iyo waliba meel aad hiigsanayso. Sanadka inta uusan dhalanin waxaa lagaaga baahanyahay inaad la timaado qorshe cad ee kuu qoran adiga iyo waliba qaababka aad ku gaari garto hadafyada ugu waa weyn ee noloshaada. Waligaa ha noolaanin qorshe la’aan, inkastoo waxwalbo Illaahay s.w.c xaggiisa ay ka qoranyihiin. Qorshaha cad waa waxyaabaha ay aadanuhu isku dhaafeen, haddii aad tahay shaqsi nool bilaa qorshe sanad walbo oo dhashana wuxuu kaaga dhammaani doonaa billaa macno daro.
”Hadal badan haan ma buuxsho” waxaad marwalbo ogataa qofka aanan hadafka lahayn wuxuu ku suganyahay nolol aan farxad lahayn, iyo waxaa la sheegaa in qofkaas la kulmo xaalado kala duwan sidda cilmi nafsiga iwm.
Waxaa jira dhibaatooyin badan oo nafsaani ah oo kala geddisan. Mid kastaa waxay leedahay magac cilmmiyeysan oo lala xariiriyo. Dadka qaba cudurkaan nafsaaniga ah badanaa waxay dhib kala kulmaan dhinacyada dad la socodka iyo bulshonnimadaba. Waxay dhib badan kala kulmaan inay fahmaan naftooda iyo tan dadka kaleba. Waxay leeyihiin dhaqan ah ”ha i taabanin ku taaban maayee” sidda badannaa waa dad aad u qalafsan oo tooda kaliya inay socoto uun jecel, markasta tooda ayay u baqaan, ma garqaataan, waana muquunin jecelyihiin.
Siddoo kale cudurkaan wuxuu kamid yahay cudurada ugu adag in la daaweeyo marka loo fiirsho cudurada dhimirka, maxaa yeelay dad qabaa meelo badan waxay ku leeyihiin caadi oo dadka waa la dhaqmi karaan. Meelaha ay badanaaba ku fashilmaan waxaa kamid ah xariirka guurka iyo bulshooyinnimada. Sidaas awgeed waxaa wanaagsan inaad yeelato hadaf cad ee muuqda si aad ugu badbaado cudurada bini’aadamka hormarkooda dib u dhiga
Aqristoow, ma ogtahay marka aad dhalatay dunidda waxaa kusoo kordhay shaqsi cusub, waana adiga. Waxaan shaki ku jirin inaad adiga tahay shaqsigaasi ay dunidda sugaysay –waa adiga qofka dunidda ay sugayso ee maxaad sugaysaa?
Tags: Dadka Aanan Hadafka Lahayn Waxay ku Suganyihiin Nolol Aan Farxad Lahayn!
Next post Maxaa Sababa Sicir-bararka?
Previous post Soomaali Noqday Qofkii ugu Da’da Yaraa oo Qaata Shahaadada PhD-ga -Philippines